Muummichi Ministeeraa Hooggantoonni godinaalee fi aanaalee naannoo Kibbaa kanneen dhiheenya waldhabbiin keessatti uumamee ture aangoo isaanii akka lakkisan gaafate. - NuuralHudaa
Muummichi Ministeeraa Hooggantoonni godinaalee fi aanaalee naannoo Kibbaa kanneen dhiheenya waldhabbiin keessatti uumamee ture aangoo isaanii akka lakkisan gaafate.
On Jun 20, 2018 28
Muummichi Ministeeraa Dr Abiy Ahmad gara naannoo Sabaa fi sablammoota ummata kibbaatti imaluun magaalota Hawaasaa, Walaayitaa Soddoo fi Walqixxee keessatti ummata waliin marii godhaa jira. Iddoowwaan dhiheenya kana waldhabbiin itti kaheetti ummata naannicha waliin mari’aatun, Hoggantoonni Godina Walaayitaa, Sidamaa, Guraagee fi akkasumas Hooggantoonni aanaa Qabeennaa waldhabbii naannichatti kahee tureef itti gaafatamummaa fudhatuun aangoo akka lakkisuu qaban ibse.
Marii guyyaa hardha godina Guraagee magaalaa Walqixxee keessatti bakka bu’oota ummata waliin godhame irrattis, gaaffiiwwan ummata irraa dhihaateef mummichi Ministeeraa deebisaa kan keenne tahuus odeeffannoon argame ni addeessa.
muummicha ministeeraaNaannoo kibbaa
July 6, 2022 sa;aa 6:22 am Update tahe